Home Wararka Safiirka cusub – Mareykanka oo durbadiiba bilaabay inuu culeys saaro siyaasiyiinta Soomaalida
Safiirka cusub – Mareykanka oo durbadiiba bilaabay inuu culeys saaro siyaasiyiinta Soomaalida
Danjiraha Maraykanka ee Soomaaliya, Larry E.André ayaa dhaweeyay sida ay uga go’an tahay madaxda Soomaaliya in la soo gebagebeeyo doorashada Golaha Shacabka marka la gaaro 25-ka Febraayo.
Danjire André oo ku soo aaday xilli xasaasi ah oo lagu jiro doorashada federaalka, ayaa maanta la filayaa in uu warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyo madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya.
Safaaradda Maraykanka ayaa sheegtay in André uu horey arrimaha Soomaaliya ugasoo shaqeeyay markii uu ka ahaa La-taliyaha Safaaradda Nairobi ee 2006 ilaa 2008, isagoo Mareykanka u matalay shirar caalami ah oo ku saabsan geeddi-socodka nabadda Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Larry Edward André Jr bishii abril ee sannadkii hore u doortay inuu noqdo danjiraha cusub ee Mareykanka u qaabilsanaan doona Soomaaliya.
Safiirka cusub ayaa beddelay Donald Yamamoto, oo ahaa danjiraha Soomaaliya tan iyo November 2018.
Previous articleXubno ka tirsan Al-shabaab oo lagu qabtay Boosaaso
Next articleAbiy Axmad oo si diiran loogu soo dhaweeyay magalaada Jig-Jiga
Gaari Qarax sida oo lasoo dhigay Agagaarka Hotel Wehliye